Ezemidlalo Ukufaneleka, Yoga
Ukuzindla muva nje kuyanda ezingasho. Ziningi nesithakazelo esikhulu sokufunda indlela sokuzindla ngenxa nje yokuthi sekuwumkhuba, kodwa, nokho, iningi namanje uthanda ukufunda nokuzindla ukuze akhulule zonke izinhlobo izingcindezi nobunzima. Ukuzindla kungasiza nasekunciphiseni ufunde indlela sihlale siqinile ngokomoya lapho isiphi isimo ukuhlala uphumule.
Kungakhathaliseki ukuthi elula kungase kubonakale umsebenzi, eqinisweni, kulabo abafuna ukufunda izindlela ukuze ufunde ukuthi ukuzindla, kungenzeka kube nabathile nezingqinamba nobunzima. Kodwa lokhu akusho ukuthi lesi art ungakwazi kuphela ukubhekana izindela abakhulekela Buddha Omkhulu. Noma ubani ofisa uyakwazi ngempela ukuze ufunde ukuthi ukuzindla futhi ufunde ukuze balukhulume lamakhono.
Empeleni, ukuzindla abakwazi kuphela ukusiza ekudambiseni ukucindezeleka ngemva kokusebenza kanzima usuku lonke, kodwa futhi ukuletha inzuzo omkhulu impilo ngokomzimba lomuntu. Ngokwesibonelo, labo lokuqala waqala ukwenza lokhu, emva kwamaseshini ambalwa ungaphawula ukuba ngcono okukhulu ngo isimo sezempilo, abasizwa ama-ingcindezi ukunciphisa lokunyathelisa nenani cholesterol eziyingozi egazini. Ngaphezu kwalokho, lokhu art ithuthukisa ikhono lomuntu bobuchule, kuqinisa amasosha omzimba futhi aqede engenabulungisa ukukhathazeka ukuhlaselwa. Abathandwayo Eqinisweni kungase kutholakale ngokwesayensi ukuthi izivivinyo ezifana kukhuthaza ukukhiqizwa eziningi ezivikela umzimba emzimbeni womuntu xaxa umkhuhlane.
Ngaphambi kokuba uqale ukuzindla, lwanele ukufunda inqubo elula eyodwa kuphela futhi ulisebenzise nsuku zonke. Omunye akufanele ukhathazeke futhi besabe ukwenza okuthile okungalungile, ngoba e ukuzindla asikho isenzo ecacile neqondile. Umthetho obaluleke kakhulu - azolilalela izwi lakho kwangaphakathi, imizwa yakho, futhi, ngokufanelekile, ukuze ulungise esenzweni, zama ukushintsha into, ukucinga emizweni ezintsha.
Ukuphendula imibuzo kusuka Wabasaqalayo sendlela ufunde ukuzindla, ochwepheshe batusa, okokuqala kunakho konke, ukuze balukhulume kahle izinto eziyisisekelo. Labalobi ukweluleka ukuthatha isikhundla ukhululekile esihlalweni, kufanele kube ukugcina yakho emuva ngqo, ekhululekile, kungekho slouch. Beginners ungakwazi ukuncika ngokumelene emuva esihlalweni noma udonga ukuze kube lula ukugcina emuva zakho ziqonde esimweni esikhululekile. Ezinye kungaba nzima impela uphumule kulesi sikhundla. Kulokhu, wabeka umcamelo phansi futhi ahlale kuso. Omunye umsunguli weluleka zifiki isikhundla sidindilize izinyawo zakhe esitulwini.
Njengomthetho, ngaphambi kokuqala kweseshini, kutsha, ukuba isikhathi esithile ukufaka ezinye umculo okuphumuzayo. Kukhona imiculo eziningi ezahlukene wadala ngqo izifundo ezinjalo, kodwa eqinisweni, umculo ezifanele kakhulu nguye okuthandayo kumuntu othize, esiza ke kuye ukuba kwehle uvalo. Kufanele bazi ukuthi ukuzindla nje session kumele kwentiwe dú, ngakho ngaphambi ekuqaleni ukubekela eceleni noma yimuphi umsindo. Ukuqala umsebenzi ingahlala imizuzu engaba mihlanu, kancane kancane ngokuba isikhathi eside. Into esemqoka lapha akukhona ukuthi bachitha imali engakanani e imizuzu noma amahora ukuphumula, kanye nesifiso nakho ekuphileni kwangempela, efana ukucindezeleka, kahle, ukucindezeleka ushiya umzimba bese kuza ezolile. Futhi izibalo musa zincike kwezinye amazinga, kodwa amakhono ngabanye yomuntu.
Lapho ubonisa, kudingeka uphefumule ngendlela efanele, okungukuthi ukukwenza ekhaleni, ngomoya ophansi, umlomo kufanele ivalwe. Omunye izithiyo ezivame kakhulu ukuphumula Wabasaqalayo kuba phambi imicabango eziningi ezahlukene ekhanda lami. Kulokhu, kutuswa ukuba ugxile umoya wakho, ukubala ukuthi uhogele ngamunye futhi awumoya okhishwa ngamakhala, noma ulandele ukunyakaza esiswini. Uma imicabango futhi baqale ukugxambukela, kufanele ubuyele emuva umoya. Ekuqaleni, ukuthuthukiswa amasu zokuzindla kungaba nzima kakhulu, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ungakwazi kalula ufunde indlela ukuqeda isimo ongathandeki emisebenzi unomphela.
Hatha yoga - kuyinto ... Hatha Yoga Wabasaqalayo: isimo sokuqala ngqa
Indlela yokuvula Chakras
Umgogodla yoga kahle
Asana nefilosofi. Yoga Wabasaqalayo
6 yoga asanas ukuthi kungenziwa ngaphandle kokushiya embhedeni
WaseByzantium, Georgian futhi Old amaphethini netinchazelo tawo. Old Russian nomhlobiso isithombe
Yi-ectoderm - lokhu yangaphandle imbewu ungqimba
Amadombolo ebhodweni: zokupheka
Tetanus - Kuyini? Izimbangela, izimpawu kanye imithi yesifo
Imvumelwano Okungenzeka igama elithi "ihora"
Imicikilisho yokusebenzelana Orthodox kanye namasiko: Lunini usuku ingelosi Olga